I-14 / 02 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: NgoFebhuwari 14, 2020
Emakomitini weSecial Trade Procurement Committee ahlelwe yiBursa Chamber of Commerce and Industry ukukhulisa ukuthunyelwa kwezinkampani, ukumiswa okusha bekuyiMexico, umnotho we-15 omkhulu emhlabeni. I-BTSO enhlanganweni ehlelelwe umkhakha wemishini [Okuningi ...]
I-Republic of Turkey State Railways (TCDD) sesitimela sesitimela zemininingwane Operators nabaphathi Civil Society Izinhlangano ku 13.02.2020/3/XNUMX endaweni Ankara Isiteshi Sesitimela eHholo XNUMX Behiç Ergun ababehlangana kulelo Consultative Umhlangano. [Okuningi ...]
Inqubo yokulethwa kwemibhalo yokuqashwa kwabasebenzi ngeziqu ezahlukahlukene ezizokwenziwa yiDeneral Directorate ye-TCDD Tasimacilik isiqediwe. Qhafaza lapha ukuthola uhlu lwabaqokelwe imibhalo yabo ethathwa njengefanele futhi inelungelo lokuhlolwa ngomlomo. [Okuningi ...]
Ingqungquthela ethi "Conformity and Certification Conference on Rail Systems" izobanjelwa yi-Rail Systems Association ngoFebhuwari 28, 2020. Le nkomfa izoba se-Ostim Conference Hall / Ankara usuku olu-1 (olulodwa), amaphaneli ama-3 (amathathu) kanye [Okuningi ...]
Izicelo ezisetshenziselwa ukungenelela kokuqonda kanye nemizamo yokwandisa umgwaqo esetshenziswe nguMasipala waseBursa Metropolitan yaboniswa kwimininingwane yamazwe omhlaba, ekwehlisile ukugcwala kwezimoto. Ocwaningweni lwenkampani eseNetherlands, elungiselela ukugcwala kwezimoto emhlabeni wonke, 2018 [Okuningi ...]
UNgqongqoshe Wezokuxhumana kanye Nezingqalasizinda uCahit Turhan uthe kuzokwakhiwa izinqola eziphelele ezingama-400 zenkampani ese-Austria GATX, ngokubambisana komkhakha ozimele we-TÜDEMSAŞ. [Okuningi ...]
I-IETT isayine isivumelwano nabakwaChamber of Mechanical Enjiniya ngaphakathi kokuhlolwa nokugcinwa kwamabhasi ayo. Ngakho-ke, izimpendulo zale mibuzo zinikezwa isikhungo esizimele ngaphandle kwabahloli bama-IETT nezinkampani zosonkontileka zokugcina izingane. [Okuningi ...]
Ngesikhathi kubhekwa imisebenzi yokuhlaziya ye-Antalya Metropolitan Municipality Transportation Master Plan, ihlangane namakhanda kanye namalungu omfelandawonye wezimbambiswano abasebenza eKumluca naseFinike. Isihloko senguquko, ukuvuselela nokujikeleza okuhlanganyelayo emhlanganweni [Okuningi ...]
U-Ünal Karadağ, oyilungu le-United Transport Emp abasebenzies Union futhi onguSekela Mqondisi we-TCDD 3rd Regional Directorate Izmir Traffic and Station Management Service Directorate, udingiselwe uMalatya ngaphansi kwegama lakhe lokujikeleza. [Okuningi ...]
Umshini wokushayela indiza onenkontileka kanye nokulungiswa kwezindiza uzoyiswa kwiGeneral Directorate of Forestry (OGM) yoMnyango Wezolimo Namahlathi. Ngokwesimemezelo soMnyango Wezokulima Namahlathi Jikelele Directorate of Forestry (OGM) eshicilelwe kuGazethi Esemthethweni, [Okuningi ...]